कोरोनाको भेरियन्ट पत्ता लगाउने जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण नेपालमै सुरु
समभाव शुक्रबार, असोज १५, २०७८
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार पत्ता लगाउने जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण नेपालमै सुरु भएको छ । यसअघि कोरोना भाइरसको म्युटेसन पत्ता लगाउन त्यसको नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउने गरिन्थ्यो । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालामा जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले नेपालमै जिन सिक्वेन्सिङ सुरु भएको बताइन् ।
यसअघि जिन सिक्वेन्सिङ पत्ता लगाउन नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा विदेशमा पठाउनु परेको बताउँदै उनले अब नेपालमै कोरोना भाइरसका विभिन्न म्युटेसन पत्ता लगाउन सकिने बताईन् । त्रभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय बायोटेक्नोलोजी विभागमा १६ र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा २६ नयाँ नमुना जम्मा गरी ४२ वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको उनले बताईन् । उनले भदौ र असोजमा सङ्कलन भएका सबै नमुनामा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको बताइन् । जिन सिक्वेन्सिङले कोरोना भाइरसको म्युटेसन पत्ता लगाउँछ ।
डा. झाले जिन सिक्वेन्सिङ कोरोनालगायतका भाइरसको जेनेटिक बनावटलाई डिकोट गर्ने एक परीक्षण भएको बताइन् । पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरसको जिन शरीरमा छ कि छैन जाँच गरिन्छ । त्यस्तै जिन सिक्वेन्सिङमा भाइरसको बनावटका बारेमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ । जिन सिक्वेन्सिङ अनुसन्धानका लागि मात्र गर्ने गरिन्छ ।कोरोना भाइरसले आफ्नो जिनमा साना-साना परिवर्तन गरिरहनुलाई म्युटेसन भनिन्छ । धेरै जस्तो म्युटेसनले कुनै प्रभाव नपार्न सक्छ । कहिलेकाहीँ म्युटेसनले भाइरसमा ठूलो बदलाव ल्याइदिन्छ । भाइरस बढी सङ्क्रामक हुन सक्ने, छिट्टै फैलिन सक्ने, उपलब्ध औषधिले काम नगर्ने हुन सक्छ ।
भाइरसको परिवर्तित स्वरूपलाई नयाँ भेरियन्ट भनिन्छ । त्यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा नाम दिन्छ । नयाँ भेरियन्टले विश्व जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना भएमा त्यसलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्नको संज्ञा दिइन्छ । डा.झाले सर्वे गर्नका लागि मात्र जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने भन्दै यो अत्यन्त महँगो हुने भएकोले व्यक्तिपिच्छे परीक्षण गरिरहनुपर्ने जरुरी नरहेको बताईन् । हाल नेपालमा कोरोना भाइरसको अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा गरी चारवटा भेरियन्ट देखिएका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट १४९ वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गराइसकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अब विदेशमा नमुना पठाउनु नपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १५, २०७८, ११:३०:००